Ịzụta ntụ ntụ drospirenone (67392-87-4) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Hormones / Ntụ ntụ Drospirenone (67392-87-4)
SKU: 67392-87-4. Category: Hormones
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke ntụpọ Drospirenone (67392-87-4), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Drospirenone ntụ ntụ bụ progestin synthetic bụ nke analog na spironolactone. A na - achọta ya n'ọtụtụ usoro nchịkwa ọmụmụ. Drospirenone dị iche na progestins ndị ọzọ na-emepụta ihe na ya na profaịlị na-egosi na ọ ga-adị nso na progesterone eke ....
Drospirenone ntụ ntụ video
Drospirenone ntụ ntụ isi agwa
aha: Drospirenone ntụ ntụ
Molekụla Formula: C24H30O3
Ọbara arọ: 366.49
Uzo okirikiri uzo ogwu
Aha aha: Drospirenone powde,
Aha ahia: Yasmin, Yaz
Drospirenone powde Jiri
Inweta ọgwụ a nwere ike ime ka ọnyá gị, ọnyá strok, ma ọ bụ nkụchi obi mee ka ọnyá gị. Ọbụna ị nọ n'ihe ize ndụ ma ọ bụrụ na ị nwere ọbara mgbali elu, ọrịa shuga, cholesterol dị elu, ma ọ bụ ọ bụrụ na ibu oke. Ihe ize ndụ gị nke ọrịa strok ma ọ bụ eriri ọbara dị elu karịa afọ mbụ nke ịmị mkpụrụ ọgwụ. Ihe ize ndụ gị dịkwa elu mgbe ị malitegharịrị ọgwụ ọgwụ mụọ mgbe ị naghị ewere ha maka izu 4 ma ọ bụ karịa.
Ịṅụ sịga nwere ike ime ka ọnyá gị, ọrịa strok, ma ọ bụ obi mgbu gị dịkwuo ukwuu. Ihe ize ndụ gị na-eme ka okenye ị bụ na ka ị na-aṅụ sịga. I kwesịghị ịṅụ ọgwụ a ma ọ bụrụ na ị na-aṅụ sịga ma na-agafe 35 afọ.
Ejila ya ma ọ bụrụ na ị dị ime. Kwụsị iji ọgwụ a gwa dọkịta gị ozugbo ma ọ bụrụ na ị ga-atụrụ ime, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọta oge elekere anya nke oge 2. Ọ bụrụ na ị nwere nwa ọhụrụ, chere ma ọ dịkarịa ala 4 izu tupu iwere ọgwụ a.
I kwesịghị ịṅụ ọgwụ a ma ọ bụrụ na i nwere:
-agba aghara aghara;
-gabiga ọbara mgbali elu ma ọ bụ na-achịkwaghị achịkwa;
ọrịa obi na-arịa ọrịa akwara ọbara, akụkọ ihe mere eme nke obi mgbawa, ọrịa strok, ma ọ bụ eriri ọbara);
-anwe ihe ize ndụ dị ukwuu nke ịmịnye ọbara n'ihi nsogbu obi ma ọ bụ nsogbu ọbara kpatara;
Nsogbu nsogbu na-akpata (karịsịa ma ọ bụrụ na ọrịa shuga);
- akụkọ banyere ọrịa cancer nke ọrịa hormone, ma ọ bụ cancer nke ara, akpanwa / cervix, ma ọ bụ ikpu;
-ọbụrụ na-agba ọbara ọbara nke dọkịta nyochaghị;
ọrịa ma ọ bụ ọrịa imeju;
- isi ọwụwa oke migraine (nke nwere mmerụ, nhụjuanya, adịghị ike, ma ọ bụ mgbanwe mgbanwe n'ọhụụ), karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ okenye karịa 35;
- akụkọ ihe mere eme nke jaundice mere site na afọ ime ma ọ bụ mụọ nwa;
- ọ bụrụ na ị na-ese anwụrụ ma na-elezi 35 afọ; ma ọ bụ
- ọ bụrụ na ị na - aṅụ ọgwụ ịba ọcha n'anya nke C nke nwere ombitasvir / paritaprevir / ritonavir (Technivie).
Iji jide n'aka na ọgwụ a dị mma maka gị, kọọ dọkịta gị ma ọ bụrụ na ịnwere:
nsogbu obi, ọbara mgbali elu, ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ dị mfe inwe mkpịsị ọbara;
adịghị ike potassium na ọbara gị;
cholesterol ma ọ bụ triglycerides, ma ọ bụ ọ bụrụ na ibu oke;
ọrịa ma ọ bụ akụrụ;
-eme ihe na-atọ gị ụtọ, ọrịa shuga, ọrịa gallbladder; ma ọ bụ
Hụmmoni na ọgwụ a nwere ike ịbanye n'ime mmiri ara ara ma nwee ike imerụ nwatakịrị nọọsụ. Ọgwụ a nwere ike ime ka ịmepụta mmiri ara ara. Ejila ya ma ọ bụrụ na ị na-azụ ara.
Kedu ihe bụ usoro onu ogwu nke Drospirenone
ANYỊ GA-EBE ECHICHE NDỊ A GA-EBE NDỊ NA-ECHICHE NA-AHỤ NA NTỊ NA ANYỊ GA-EBE EKWUGHỊ ỊBỤRỤ ỤLỌDỤ MA ỌZỌ ỌZỌ ỌZỌ.
Were ọgwụ a site n'ọnụ dịka dọkịta gị gwara gị, na-eri nri ma ọ bụ na-enweghị nri, otu ugboro kwa ụbọchị. Chọpụta oge nke dịịrị gị mfe icheta, ma were mpi gị n'otu oge kwa ụbọchị, 24 awa dị iche iche. Ịnara ọgwụ a mgbe nri ụtụtụ gị ma ọ bụ mgbe ị na-ehi ụra nwere ike inye aka belata ịda mbà n'obi na ọgbụgbọ.
Soro ntuziaka ngwugwu iji chọta mbadamba mbụ, malite na mpempe akwụkwọ mbụ n'ime mkpọ, ma were ha n'usoro ziri ezi. Akwụsịla ụdị ọ bụla. O yikarịrị ka ị ga-enwe afọ iri na ụma ma ọ bụrụ na ị na - ahụ mkpụrụ ọgwụ, na - amalite mgbakọ ọhụrụ, ma ọ bụ buru ọgwụ gị n'oge dị iche iche nke ụbọchị ka ọ dị na mbụ.
Mkpụrụ ngwugwu gị nwere mkpụrụedemede 21 na ọgwụ na-arụ ọrụ (na hormones). Ọ nwekwara ike ịnwe ọgwụ nje 7 (na-enweghị hormones) na njedebe nke mkpọ. Were otu ihe na-arụ ọrụ (na hormones) otu ugboro kwa ụbọchị maka ụbọchị 21 n'usoro. Ọ bụrụ na ị na - eji ngwaahịa 28 mee ihe, buru pill ncheta otu ugboro kwa ụbọchị maka ụbọchị 7 n'otu usoro mgbe ị nụsịrị ụbụrụ ikpeazụ na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na dọkịta gị edeghị ya. Ọ bụrụ na iji ngwaahịa 21 na-eji ngwaahịa, ebula mbadamba nkume ọ bụla maka ụbọchị 7 ma ọ bụrụ na dọkịta gị edeghị ya. Ị kwesịrị ịnwe oge gị oge n'ime ụbọchị 3 mgbe i were mbadamba arụmọrụ ikpeazụ n'ime oge. Mgbe i mechara ọgwụ ncheta ikpeazụ na mkpọ ma ọ bụ na-aga 7 ụbọchị n'enweghị mpempe akwụkwọ na-arụ ọrụ, malite ihe ọhụrụ na-esote ụbọchị ma ọ bụ maọbụ na ị nwere oge gị. Ọ bụrụ na ịnweghị oge gị, gwa dọkịta gị.
Ọ bụrụ na nke a bụ oge mbụ ị na-eji ọgwụ a ma ị na-adịghị na-agbanwe site n'ụdị ọzọ nke mgbaaka ịmụ nwa (dịka patch, mkpụrụ ọgwụ mgbochi ọzọ), buru mbadamba mbụ n'ime mkpọ ahụ na Sunday mbụ mgbe ịmalitere oge nsọ gị ma ọ bụ n'ụbọchị mbụ nke oge gị. Ọ bụrụ na oge gị amalite na Sunday, malite ịṅụ ọgwụ a n'ụbọchị ahụ. Maka ụzọ mbụ eji eme ihe, jiri ụdị ọzọ nke akara ịmụ nwa (dịka condom, spermicide) maka ụbọchị 7 mbụ iji gbochie ime ime ruo mgbe ọgwụ ahụ nwere oge zuru oke ịrụ ọrụ. Ọ bụrụ na ịmalite n'ụbọchị mbụ nke oge gị, ịkwesighi iji nzụlite ọmụmụ nwa n'izu mbụ.
Jụọ dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọgwụ maka ihe ọmụma maka otu esi gbanwee site n'ụdị ndị ọzọ nke mgbaaka ịmụ nwa (dị ka patch, mkpụrụ ọgwụ mgbochi ọzọ) na ngwaahịa a
Otú Drospirenone powed na-arụ ọrụ
Agbara nke Drospirenone bụ otu n'ime ọtụtụ progestins dị iche iche a na-eji na ọgwụ akara nwa. Ihe ka ọtụtụ mkpụrụ ọgwụ mịrị amị (ọgwụ mkpịsị ejikọta ọnụ) jikọtara otu ihe synthetic nke hormone progesterone (nke a na-akpọ progestin) na ụdị estrogen nke hormone nwanyi. Na mgbakwunye na mgbochi nke ime ime, ụfọdụ mkpụrụ ọgwụ ịchịkwa nke nwere Drospirenone powde na-anakwere ka ha na-emeso mgbaàmà nke ọrịa dysphoric oge mbụ (PMDD), na-emeso acne dị oke mma, na ịkwalite ọkwa dị elu, na ndị inyom na-ahọrọ iji ọgwụ mgbochi ọnụ maka ọmụmụ njikwa ..
Ndị na-emepụta ihe dị ka Drospirenone powde na-agbasa kpamkpam n'ime mkpụrụ ndụ ndị a na-achọpụta na tracting reproductive feminine, mammary gland, hypothalamus, na pituitary ma jikọta ya na onye ntanetị ahụ. Ozugbo a na-agbatị ya na onye nkwụnye ahụ, ndị na-agba ọsọ na-eme ka ngwa ngwa ịhapụ nke gonadotropin na-ahapụ hormone (GnRH) site na hypothalamus ma mee ka elu LH na-amalite tupu ya amalite.
Aṅụla sịga mgbe ị na-eji ọgwụ nchịkwa nwa, karịsịa ma ọ bụrụ na ị ka okenye karịa afọ 35.
Mkpụrụ ọgwụ akara ọmụmụ agaghị echebe gị pụọ na ọrịa ndị a na-ebute site ná mmekọahụ-gụnyere HIV na AIDS. Iji condom bụ nanị ụzọ ị ga-esi chebe onwe gị pụọ na ọrịa ndị a.
Ọtụtụ ọgwụ ọjọọ nwere ike ịmekọrịta mkpụrụ ọgwụ mụta nwa ma mee ka ha dị irè, nke nwere ike ime ka ime ime. Ethinyl estradiol nwekwara ike imetụta ọbara nke ụfọdụ ọgwụ ọjọọ ndị ọzọ, na-eme ka ha dị irè ma ọ bụ na-enwe mmetụta dị ụba. Nke a na-agụnye ọgwụ ọgwụ, ọgwụ vitamin, na ọgwụ ndị na-edozi ọgwụ.
Drospirenone ntụ ntụ
Ngwá ike nke Drospirenone nwere mmetụta ọ bụla
Uzo ogwu nke Drospirenone di iche na ihe ndi ozo nke procentine na ihe omuma ihe omumu ya na omuma ihe omumu negosi ya ka odi nso na progesterone. Dị ka ndị dị otú ahụ, ọ nwere ihe mgbochi mineralocorticoid, na-emegharị ihe omume nke estrogen na usoro renin-angiotensin-aldosterone, ọ bụghịkwa androgenic.
A na-etinye aka na nkwonkwo ma ọ bụ na-esite na nchịkwa ma ọ bụ nchịkwa. Ndị isi metabolite abụọ bụ ndị na-adịghị arụ ọrụ ma na-emepụta onwe ha site na usoro CYP450 enzyme. Ndị metabolite bụ ụdị acid nke Drospirenone powde guzobere site na mpepe nke lactone na 4,5-dihydro-Drospirenone powde-3-sulfate.
isi ọwụwa, mgbanwe ọnọdụ uche, enwe mmetụta ike gwụrụ ma ọ bụ iwe;
uru uru; ma ọ bụ
mgbanwe na oge ịhụ nsọ gị, mgbatị na-ebelata.
Nke a abụghị ndepụta zuru oke nke mmetụta ndị ọzọ na ndị ọzọ nwere ike ime. Kpọọ dọkịta gị maka ndụmọdụ ahụike gbasara mmetụta dị iche iche.
Esi zụta Ugwu Drospirenone si AASraw
Drospirenone ntụ ntụ Ezi ntụziaka